Hitantsika Ve Indray Andro Any Ny Fiafaran’ny Fanarahamaso Ny Famoahana Vaovao ao Azerbaijana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2018 15:08 GMT
Vakio amin'ny teny English, македонски, Français, Español, Italiano, Ελληνικά, English
Polisy tao Azerbaijana mitazona tovolahy iray. Sary avy amin'ny Radio Free Europe / Radio Liberty, nahazoana alalàna ny famerenana mampiasa azy..
Nandritra ny fivorian'ireo mpikambana ao amin'ny OTAN tany Bruxelles ny volana Novambra 2017, nasongadin'ny Filoha Azerbaijana, Ilham Aliyev, ny maha-zava-dehibe ny fahalalahàna haneho hevitra sy ny fahalalahàn'ny aterineto.
Famintinana iray nivoaka tao amin'ny tranonkala ofisialin'ny Fitantanam-Panjakàna no namerina ilay tenin'i Aliyev toy izao manaraka izao :
“Ho fanasongadinana ireo olan'ny fampandrosoana ara-demokratika, nilaza ny filoha Ilham Aliyev fa azo antoka ny fahalalahàn'ny aterineto, ny fahalalahàna maneho hevitra, ny fahalalahàna hivory ary ny fahalalahàna maro hafa ao Azerbaijana.”
Nmpihetsika ny volomason'ireo mpanao gazety Azerbaijana maro io fanambaràna io sy ireo fanehoankevitra hafa mitovy amin'izany. Tena lavitry ny fihetsiny nandritra ny dimy taona lasa ireo teny nataon'i Aliyev ireo.
Teo anelanelan'ny taona 2013 sy 2015, ny firaradraraky ny fanovàna lalàna sy ny fandrahonana tsy ara-drariny dia nampangozohozo sy nanao ho lasibatra ireo fiarahamonina sivilin'ireo mpanao gazety tao Azerbaijana, ireo mpikatroka ary ny fikambanan'ny tanora. Maro no voasambotra nohon'ny fiampangana tsy mitombina. Ny hafa nandao ny firenena nohon'ny tahotra ny fanenjehana.
Vokatr'izany, nivadika ho any amin'ny tontolo aterineto avokoa ny ankamaroan'ny resadresaka mikasika ny demokrasia, ny zo ary ny fahalalahàna . Saingy isantaona, lasa miha-mazava hatrany fa tsy misy fandeferana ihany koa ho an'ny fanoherana anaty aterineto.
Ohatra iray farany ny zava-niseho ny 1 Desambra 2017, tamin'ny nampidirana sy naneken'ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta ilay andiana fanavaozana lalàna vaovao izay hitazona ny tsirairay, ny mpiasam-panjakana ary ireo izay tompon'andraikitra manoloana ny lalàna – handoa lamandy – amin'ny famoahana vaovao “voarara” anaty aterineto.
Raha misy loharanom-baovao avy amin'ny aterineto tafiditra ao amin'ilay lisitr'ireo Fampahalalambaovao Voalaza fa Nametraka Vaovao Voarara Tsy Hozaraina, dia tokony hoferana avy hatrany ny fidirana amin'ny votoaty tahaka izany hita ao anatiny. Raha tsy izany, ny tompona orinasa sy ny mpamatsy aterineto dia voatery handoa lamandy 1500-2000 AZN raha avy amin'ny mpiasam-panjakana ary 2000-2500 AZN raha avy amin'olon-tsotra tomponandraikitra manoloana ny lalàna.
Tsy nolazain'ireo tomponandraikitra ny fomba ho ataon'ireo tranonkala izay manohana ny fanehoankevitry ny mpamaky na ny lahatsoratry ny mpampiasa azy ireo (tahaka ny Facebook sy YouTube) mba hanarahana ireo fitsipika ireo, raha toa ka misy ny mpampiasa azy mandefa votoaty izay voasokajy ao anatin'ilay fandraràna.
Maharakotra sokajinà votoaty fantatra amin'ny hoe “vaovao voarara” ilay fandraràna, izay voasoratra tao aminà didim-pitsarana iray nivoaka ny volana May 2017 ka nanome alalàna ny governemanta hanivana ireo vohikala misy karazana votoaty manokana.
Araka ilay didim-pitsarana, ny “Vaovao voarara” dia mety ahitàna ireto sokajy manaraka ireto
vaovao mampiroborobo ny fanaovana an-tendrony ara-pinoana, ny revolisiona, fikomiana faobe ary ny fampielezan-evitra mitovy amin'izany;
[vaovao mifandraika amin'ny] tsiambarantelom-panjakana;
vaovao mikasika ny fanamboarana fitaovam-piadiana sy ny pitsopitsony amin'izany;
vaovao mikasika ny fanomanana ny rongony, ny zava-mahadomelina ary ny zavatra mitovitovy amin'izany, ny fivarotana azy;
Ny pôrnôgrafia, na vetaveta (anisan'izany ny pôrnôgrafia ahitàna zaza)
vaovao mikasika ny fampiroboroboana ny karazana lalao sy filokàna tsy ara-dalàna;
vaovao mikasika torohay ho an'ny famonoan-tena;
faniratsiràna sy fanalana baraka ary indrindra ny vaovao mamely olona manokana;
torohay momba ny fizakàmanana ara-tsaina ;
ary vaovao hafa, izay voararan'ny lalàna ao amin'ny Repoblikan'i Azerbaïdjana ny famoahana azy.
Nanambara ny biraon'ny Fampanoavana fa nosakanana ireo vaovao anaty aterineto satria miteraka loza mitatao — saingy rehefa nojerena akaiky ny votoaty nozaraina tao amin'ireo tranonkala ireo dia hita fa tsy mahafeno ny mason-tsivana ho ao amin'ilay sokajy “vaovao voarara.”
Maro amin'ireo vohikala nosakanana no namoaka indrindra indrindra lahatsoratra momba ny kolikoly ataon'ny governemanta, ny fiakaran'ny tahan'ny famonoantena ao Azerbaijana, ny faharatsian'ny fiainana ara-toekarena sy ara-tsosialy, ary ny fitantaràna ataon'ireo gazety tsy mainkina ny hetsi-panoherana ao an-toerana. Tranonkalam-baovao telo sy fahitalavitra roa mandeha amin'ny zanabolana no nakatona haingana tao amin'ny firenena. Ary nanomboka tamin'izay, mihoatra ny ampolony ireo loharanom-baovao ety anaty aterineto manome vaovao tsy miankina sy torohay no voasakana.
Izany rehetra izany dia mampametraka ny fanontaniana hoe : Ho an'iza ity “Vaovao voarara” ity no tena mampidi-doza indrindra ?
Raha ny marina, manohintohina ny olon-drehetra io fanavaozan-dalàna io, ankoatran'ny mpitondra ao Azerbaijana. Efa Fomba fanao mahazatra ataon'ny fitondran'i Aliyev izany. Nandritra ny taona maro hatramin'ny naha-teo amin'ny toerana maha filoham-pirenena azy izay azony avy tamin'ny rainy, i Ilham Aliyev dia tsy nanao afatsy izay namotehana ny fiainan'ny mpiray tanindrazana aminy..
Toy ny tsy avy amin'ny nahim-pon'ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta ao Azerbaijana samirery ny fanavaozan-dalàna ao Azerbaijana. Na hoe ny hanompo vahoaka aza no tanjon'izy ireo voalohany, isika vahoakan'i Azerbaijana aza tsy mahalala akory na tena voafidy ara-dalàna ho ao amin'ny biraom-panjakana ao izy ireo.
Ary dia tsy nahagaga ny fahitàna ny andiany faharoa amin'ny fanitsian-dalàna izay nampidirina sy neken'ny parlemanta ao Azerbaijana tamin'ny faramparan'ny taona 2017 teo. Nankatoavin'ny mpanao lalàna ny fanitsiana ny fehezandalàna momba ny fandikandalàna ao Azerbaijana, izay mampadoa lamandy midangana be ny tompon'ireo loharanom-baovao na sehatra anaty aterineto noho ny fampielezana vaovao voarara (araka izay nanasokajian'ny manampahefana azy) na ny tsy fisorohana ny fampielezana vaovao toy izany. Ny 15 Desambra, ny Parlemanta Nasionaly Azerbaijana dia nandany fanitsiana mikasika ny tafika mitam-piadiana, fandrarana ny mpanao gazety tsy hikatsaka karazana vaovao sasantsasany momba ny hetsika ataon'ny miaramila.
Ireo fikambanana sy ireo sehatra vaotazona tamin'ity andianà fepetra vaovao ity dia miankina betsaka amin'ny pejiny Facebook sy kaonty YouTube-ny hitazonana ny feony ety anaty vohikala. Maro izy ireo no nanangana vohikala fitaratra izay anohizan-dry zareo mamoaka tantara manakiana sy vaovao avy any Azerbaijana.
Azadliq Radio, ilay tolotra avy amin'ny Radio Free Europe / Radio Liberty dia mampahafantatra ny zava-misy ny mpamaky sy ny mpijery azy isaky ny fiafaràn'ny vaovaony isanandro, amin'ny fanolorany rohy vaovao foana hoan'ny filazam-baovao avoakany. Meydan TV dia miantehitra amin'ny fampiharana finday iray.
Nanoritsoritra ny fahalavoan'ny fahalalahan'ny Aterineto ao Azerbaijana i Ali Novruzov, olompirenena iray mpikatroka mafàna fo, nanoratra tao amin'ny bilaoginy hoe :
Ny nampihitatra be ny olana dia satria tsy misy fiantohana ao anaty bokin'ny lalàna mihitsy ilay lazaina hoe fahalalahana anaty aterineto. Nitarika fanakatonana vonjimaika tranonkala ireo tsy fahampiana fepetra ireo. Ankoatra ireo blaogy manao sangisangy sy tranonkala feno fampielezankevitra ara-pinoana tohanan'ny Iraniana, na Imgur aza, sehatra tsy manantsiny fizaràna sary fohy dia niharan'izany nandritra ny fotoana fohy ihany koa. Na izany aza, fepetra manokana aloha hareto ny fanakatonana tranonkala. Na hoe fepetra tsy ara-drariny aza ilay izy, tsy matetika ny governemanta no nanao azy io fa amin'ny toe-javatra notsongaina ihany.
Tamin'ny fitontonganan'ny vidin-tsolika sy fiharatsiana isanandron'ny toekarena, hita fa tsy nilefitra nanoloana ny fanoherana intsony ny governemanta na anaty aterineto izany na ivelan'ny aterineto. Efa voasisa ihany koa ny andron'ny fahalalahan'ny aterineto. .
Raha efa fitsipika ankapobeny fanao ny fifehezana ny zo fototra sy ny fahalalahana, ny fanarahan-dia ny mpikatroka, rehefa manenjika ireo mpikambana mavitrika ao amin'ny fiarahamonim-pirenena ao Azerbaijan, ny fipasohana ny lalàna efa misy dia toa nanamora lavitra kokoa ny zavatra rehetra ho an'ny fitondrana rehefa mila mamaly eo anoloan'ny mpanaramaso iraisam-pirenena ny zo sy ireo andrim-panjakana. Voalohany dia mahafaly ireo mpitarika ny miteny hoe tsy raharahan-dry zareo izany, na misy aza fanakianana atao azy ireo, ary faharoa, manana lalàna isika, izay eken'ireo manampahefana.
Ireny fanavaozana lalàna vaovao ireny, sy ny fampisehoana ny fahefana eo amin'ny manampahefana sy ny fiarahamonim-pirenena motraka ao Azerbaijana dia maneho fa teny fotsiny ihany ny kabarin'ny Filoha Ilham Aliyev izay niresaka momba ny fahalalaham-pitenenana ary ny aterineto. Ao Azerbaijana, tsy malalaka sy misokatra izany ny aterineto.